Apple jụrụ ndị MacBook Pro Retina ndị ọrụ ma ọ bụrụ na ha jiri mkpuchi isi | Esi m mac
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị Apple na - eme ugbu a na - emetụbeghị (ọbụlagodi dịka m chetara). Nke a bụ nnyocha e mere nke ọrụ nke MacBook Pro na Retina ngosipụta nke jụọ ha maka iji igweisi isi. Na mgbakwunye, nyocha ahụ na-ajụkwa maka ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ nke MacBok Pro a.
Eziokwu bụ na ịhụ ebe Apple na-agagharị na iPhone 7 na 7 Plus, ya na wepụ ihe nkedo 3,5mm Anyị nwere ike ichere obere oge iji hụ otú ọ ga-esi pụọ na ngwaọrụ Apple ndị ọzọ na ụdị ndị ọzọ.
O nwere ike ịbụ na n'ọnwa Ọktọba ụlọ ọrụ Cupertino ga-ewetara anyị ihe a tụrụ anya ya ma ọ dị ka ọ bụ MacBook Pro gbanwereMa, n’oge a anyị anaghị eche na ha ga-ewepu ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ma ọ bụrụ na ha emee nyocha ahụ ugbu a. Nke a bụ usoro nke a ga - amalite ịhụ n’ọgbọ ọzọ nke Mac ma enwere ike ọ ga - amalite na MacBook Pro na ngosipụta Retina.
Nkọwa ọzọ bụ ịhụ ma ha ga-ege ntị ma ọ bụ na ọ bụghị n'ihe ndị ọrụ zara, ebe ọ bụ anyị agaghị amata azịza gọọmentị na nyocha ahụ. Ihe doro anya bụ na nzọụkwụ emere na ụdị iPhone ọhụụ agaghị anọ n'ọnọdụ nke abụọ dịka ọ dị ka ọ ga-eme na ụdị USB C nke 12-inch MacBook, njikọ a nwere ike ịmalite iji ya na MacBook Pro na dị ugbu a na Ọktọba, mana ha ebuteghị ya na usoro nke ide ahụ. Mkpochapu nke 3,5mm jack yiri ka ọ bụ ihe ga-emetụta ngwaahịa Apple niile na ọ bụghị n'ọdịnihu dị anya.
Ma gị, ị na-eji ọdụ isi ihe na Mac?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » Apple na-ajụ ndị ọrụ MacBook Pro Retina ma ọ bụrụ na ha ejiri nkpu isi okwu
Enwetụbeghị m ya maka Bluetooth
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na enweghị GPS na Apple Watch, gịnị kpatara na Watch os3 mgbe ịmalitere iji mgbatị ọ na-ajụ ikike gị iji ebe elekere gị?
Spotify ruru ndị debanyere aha nde 40